कन्याम चिया कमानको विषादी घर सिलबन्दी – BUSINESSPANA.COM
कन्याम चिया कमानको विषादी घर सिलबन्दी
पशुपतिनगर (इलाम), साउन २४ गते । इलामको कन्यामस्थित कन्याम चिया कमानको विषादी घर सिलबन्दी गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, सूर्योदय नगरपालिकासहितको टोलीले शनिबार बगानको अनुगमन गर्दा कडा विषादी प्रयोग गरेको पाइएपछि विषादी घर अनिश्चित कालका लागि सिलबन्दी गरिएको हो ।
विषादी प्रयोगको जनगुनासोका आधारमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गर्दा बगानमा कडा प्रकृतिको विषादी प्रयोग भएको पाइएको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा चिया बगानमा विषादी प्रयोग गर्ने मजदुरले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसमेत नअपनाएको पाइएको छ । मजदुरले विषादी प्रयोग गर्दा मास्क, पन्जा, एप्रोन नलगाएको पाइएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड फिक्कलका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीले भण्डारमा राखिएका विषादीको मुचुल्का उठाएर बगान प्रशासनलाई सिलबन्दी गरिएको पत्रसहित तीन दिनभित्रमा सूर्योदय नगरपालिकामा छलफलमा उपस्थित हुन भनिएको नगरका उद्योग अधिकृत ईश्वरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गत रहेको कन्याम चिया बगानमा ५० वर्षका लागि लिजमा लिएको त्रिवेणी सङ्घाई ग्रुपले कडा प्रकृतिको क्लोरोफाइन फस, साइपर मेथिनलगायतका विषादी मात्रा नमिलाई मापदण्डविपरीत प्रयोग गरेको पाइएपछि कन्याम चिया कमानको विषादी भण्डार घर सिलबन्दी गरिएको बोर्डका निर्देशक डा. भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कमानले चियामा विषादी प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ तर बगानमा अनुमतिबिनै मापदण्डविपरीत विषादी प्रयोग गरेको पाइएको हो । बोर्डका निर्देशक डा. भट्टराईले चियामा विषादी प्रयोग हुँदा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे ख्याल नगरिएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “यस्तो कडा विषादीले मानिसलाई त असर गर्ने नै भयो माटोसमेत सखाप बनाउँछ, त्यसैले रोकेका हौँ । ”
बगानमा यी विषादी एक पटक प्रयोग गरेपछि २१ देखि २८ दिनसम्म चियामा यसको प्रभाव रहने गरेको छ तर व्यवस्थापन पक्षले १३ देखि १४ दिनमै चिया टिप्ने गरेको पाइएको छ । निर्देशक भट्टराईले विषादी प्रयोग गरिसक्दा चिया टिप्दा अर्गानिक चिया उत्पादन अभियानमा असर गर्ने भन्दै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउनुभयो ।
बगानले कीरा मार्न, झार मार्न र चियाको उत्पादन बढाउन भन्दै विषादी प्रयोग गर्दै आएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र कन्याममा विषादी प्रयोग गर्दा घुम्न आउने पर्यटकलाई समेत उक्त विषादीले असर गर्ने भएकाले नियमन गर्न आवश्यक रहेको सूर्योदय नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष लेखनाथ खड्काले बताउनुभयो ।
कन्याम चिया बगानका व्यवस्थापक सचिन सुब्बाले बगानमा कडा विषादी विगतका वर्षदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा बोर्डले सिफारिस गरेका विषादी मात्र प्रयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । बगान आसपास स्थानीयवासीले प्रयोग गर्ने पानीका मुहानसमेत रहेका छन् । चिया बगानमा विषादी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले समेत विषादीको प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन् ।
इलाम र झापाका सातवटा चिया बगान ५० वर्षका लागि लिजमा लिएर भारतको त्रिवेणी सङ्घाई ग्रुपले चिया बगान सञ्चालन गर्दै आएको छ । केही दिनअघि इलाम र झापाका स्थानीय तहले बगान फिर्ता गरी स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
Previous: होन्डाले ल्यायो यु–गो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कुटर, दुई भर्सनमा उपलब्ध हुने
Next: प्रविधिले सहज बन्दै कृषि